Virtualbox: Mara nke ọma otu esi eji ngwa a | Site na Linux
Na nke a, anyị agaghị ekwu maka Gini bụ Virtualbox? na Gini ka Virtualbox na-eweghachi?, site na nso nso a na Blog anyị ekwuola ihe ndị a na akwụkwọ ndị a gara aga na ndị na-adịbeghị anya: "Wụnye VirtualBox na Ubuntu 18.04 LTS na nkwekọrịta" y "A tọhaala ụdị ọhụrụ nke VirtualBox 6.0 na mmelite ọhụrụ".
N'ime akwụkwọ a, anyị ga-ekwu ụfọdụ nkenke "ndụmọdụ" na ụfọdụ "ndụmọdụ bara uru" iji wee rụọ ọrụ nke ọma sistemụ arụmọrụ Virtualization.Nke ahụ bụ, ha nwere ike ịchịkwa ojiji nke VirtualBox, ma kpebie iji ya dị ka ngwa ọrụ bara uru bara uru maka ụlọ ha ma ọ bụ azụmaahịa OS Virtualization task
2 Ọdịdị dị adị
3 Aka na ndụmọdụ
3.1 General ngalaba
3.2 Ngalaba Sistem
3.3 Ngosipụta Nkebi
3.4 Ngalaba Nchekwa
3.5 Ngalaba Audio
3.6 Ngalaba Ntanetị
3.7 Serial Ports Nkebi
3.8 Ngalaba USB
3.9 Amalite Ijekọ nchekwa ngalaba
3.10 Ngalaba Ntuziaka Ndị Ọrụ
Cheta na VirtualBox bụ multiplatform 2dị XNUMX Hypervisor, nke ahụ bụ, ọ ga-abụrịrị na a ga-egbu (arụnyere) na ndị ọbịa ọ bụla (Kọmputa) yana ụdị ọ bụla ma ọ bụ nke ochie nke Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS / 2 na OpenBSD Operating Systems.
Na nke ugbu a nwere usoro mmepe na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu n'ihu na-ewepụtakwu oge, nke na - eme ka ọ bụrụ ihe ọzọ kachasị mma na ngwọta ndị ọzọ yiri ya, mana yana atụmatụ na ọrụ dị oke mma, usoro ndị ọbịa na-arụ ọrụ yana nyiwe nke ọ ga-agba.
Ọdịdị dị adị
Ugbu a Virtualbox na ụdị ya dị ugbu a, 6.0, nwere ngalaba na nhọrọ ndị a na nchịkọta nhọrọ nke ntanetị ya:
Akụkụ a nke menu na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ niile nke ngwa ahụ n'aka nke ya na-ejikwa jikwaa ọrụ niile dị mkpa nke ngwa ahụ, dị ka: storagezọ nchekwa (Ndabere nchekwa) nke faịlụ ezi uche VM eji dị ka "DPlọ akwụkwọ nyocha nke VRDP" nke VirtualBox ji mee ihe iji nwee ike ịghọ "RDP Server".
Na mgbakwunye na ịhazi ụzọ mkpirisi keyboard iji jiri ya rụọ ọrụ nke ọma site na keyboard, na -eme usoro nke mmelite na ụdị ya, na-akọwa asụsụ nke eserese eserese ma ọ bụ otu ọ ga - esi (nha na nhazi ) na nyochaa (s), n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Lee ihe a haziri ahazi nwere ike ịbụ maka ngwa n'ozuzu ya, yana maka VM ndị akọwapụtara.
Nhọrọ a chịkọtara ebe a bụ ndị a:
Mmasị (General / Ntinye / Nwelite / Asụsụ / Ngosipụta / Network / Extensions / Proxy)
Bubata Ọrụ Virtualized
Export Virtualized Ọrụ
Onye nchịkwa nke: Virtual Media / Host Network / Profaịlụ Cloud / Operations Network / Updates
Tọgharia ịdọ aka na ntị niile
Akụkụ a nke NchNhr nwere ihe niile metụtara ịmepụta ma ọ bụ ijikwa VM. Ngalaba ndi ha nwere bu ihe ndia:
Mepụta Igwe Ọhụhụ Ọhụrụ
Tinye igwe dị adị dị adị
Akụkụ a nke Nchịkọta nhọrọ na-enye ohere ịnweta ozi niile, akwụkwọ na nkwado nke ngwa ahụ. A na-agbaji nhọrọ nnweta dịnụ na ngalaba ndị a:
Ọdịnaya nke ndị ọrụ mpaghara
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị
Nyochaa akụkụ Bugtracker nke ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị
Tinye ukara forum nke website
Gosi Ohere «Banyere Virtualbox»
Aka na ndụmọdụ
Ndị na-esonụ Atụmatụ na ndụmọdụ a ga-rụrụ na VirtualBox bụ ihe ọ bụla karịa usoro nke na-atụ aro na ntọala ahaziri iche nke mmadụ ọ bụla nwere ike ime na MV ha abụọ site na ngalaba "Njikwa / Mmasị" dị na mmanya menu. Yabụ mgbanwe ndị a nwere ike ịgbaso leta ahụ ma ọ bụ kwekọọ na mkpa nke ndị ọ bụla, ndị otu ma ọ bụ nzukọ.
N'akụkụ a anyị nwere taabụ 4 nke ị nwere ike ịrụ ọrụ ndị a:
Ntọala: Gbanwee aha VM, ụdị OS, na ụdị.
Nke di elu: Họrọ ebe nchekwa maka snapshots anyị na-azọpụta site na VMs.
Nkọwa: Hazie, dee nkọwa, na nkọwapụta banyere iji ma ọ bụ ihe a ga-eme na VM iche.
Ndenye Diski: Kwado izo ya ezo nke faịlụ VM Virtual Hard Drive.
N'akụkụ a nkwanye bụ: Kwado ma ọ bụ na ọ bụghị, iji ojiji nke clipboard na izo ya ezo.
N'akụkụ a anyị nwere taabụ 3 nke ị nwere ike ịrụ ọrụ ndị a:
Mbadamba ala: Gbanwee ebe nchekwa dị, ya bụ, RAM anyị chọrọ ekenye MV, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Ihe nhazi: Mee ezigbo ihe ma ọ bụ dị irè iji nkà na ụzụ maka CPU cores, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Osooso: Họrọ ụdị nke eserese eserese iji rụọ ọrụ, ma mee ma ọ bụ ọ bụghị osooso nhọrọ.
N'akụkụ a nkwanye bụ: Họrọ ntakịrị karịa ego RAM / CPU Cores chọrọ ma ọ bụ gbakọọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji zere kefriza ma ọ bụ nwayọ nwayọ na VM, wee họrọ idebe PAE / NX na VT-x / AMD-V na VM nke na-e emomi kọmputa nke oge a .
Ihuenyo: Gbanwee ego nke nchekwa vidiyo.
Remote ihuenyo: Kwado nhọrọ njikọ njikọta dị na VM.
Ihe nkiri vidiyo: Kwado nhọrọ nnweta vidiyo na MV.
N'akụkụ a nkwanye bụ: Kesaa ihe nchekwa Vidiyo dị ka o kwere mee ma debe 3D Acceleration nyeere aka ịchekwa arụmọrụ VM dị mma.
Ijikwa VM nchekwa ego na jikwaa mebere ngwa anya disk draịva.
N'akụkụ a nkwanye bụ: Kewapụta kasị elu ego nke ezi uche ohere (GB) ka Virtual Disks ọkacha mma kere na format "Dynamically ekenyela size" kama "ofu size" ịnọgide na-enwe magburu onwe arụmọrụ na ezi ibu headroom na VM.
Iji hazie ntinye ọdịyo na mmepụta nke MV.
N'akụkụ a enweghị aro: pụrụ iche ma ọ bụ kpọmkwem banyere ya.
Iji hazie ihu ntanetị nke VM.
Ọ nwere nhọrọ abụọ dị mkpa ịhazi. Oku izizi «ejikọrọ» nke gosipụtara usoro ndị ọzọ iji họrọ ma jiri: Ejikọtaghị, NAT, NAT Network, Ada nkwụnye, Netwọk Esịtidem, Onye Na-ahụ Maka Ndị Na - Nke abụọ oku «Advanced» anyị nwere ike hazi na a dị iche iche ụzọ, ndị na-esonụ parameters nke: Nkwụnye Type, Promiscuous Mode, MAC Address, na ejikọrọ USB.
N'akụkụ a nkwanye bụ: Họrọ njikọta kwesịrị ekwesị nke oke na "Njikọ" na "Advanced" iji zere njikọ ọjọọ na ọdịda nchekwa na-enweghị isi.
Serial Ports Nkebi
Iji hazie Serial Port Kaadị nke MV.
Iji hazie ngwaọrụ na ọdụ ụgbọ USB nke VM.
Amalite Ijekọ nchekwa ngalaba
Hazie Amalite Ijekọ nchekwa n'ime VM.
N'akụkụ a nkwanye bụ: Ebe, dị ka o kwere mee, a Amalite Ijekọ nchekwa na-arụtụ aka na ezigbo Computer (Ọbịa ọbịa) ikwado mgbanwe / echebe data n'etiti ha.
Ngalaba Ntuziaka Ndị Ọrụ
Iji hazie ọdịnaya na ngosipụta nke Virtualbox NchNhr mmanya na onye ọ bụla MV.
Virtualbox bụ ngwa a na-ejikarị eme ihe n'ihi mmekọrịta enyi na enyi, ntinye dị mfe na oke arụmọrụ. Agbanyeghị, dịka Teknụzụ Nzụlite Nrụ ọrụ niile, ọ nwere ọtụtụ nhọrọ, atụmatụ na arụmọrụ nke a ga-amụta mụta. Ya mere, anyị nwere olile anya na post a ga - enyere gị aka ịgbakwunye ma wusi ihe ọmụma dị adị banyere Virtualbox.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ gbasara isiokwu a, ana m akwado ka ị gụọ akwụkwọ ọrụ metụtara ya dị na nke a njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Virtualbox: Mara nke ọma etu esi eji ngwa a
Ọ ga-amasị m ịmata ma m nwere ike iji ya na weebụsaịtị m http://ventatpv.com
Zaghachi ka ventatpv
Ọ bụrụ na ị na-ekwu na ọ bụrụ na ị nwere ike itinye weebụsaịtị a na sava weebụ nke nwere ikike na VirtualBox, mgbe ahụ ị na-eme ... O yikarịrị ka ezigbo pasent weebụ na-agba na MV.
Spygate: Linspire na-aga n'ihu na ya ...